भाग्य चम्कदै छ, आज यी राशिवालाको : २०७६ चैत १५ गतेको राशिफल ! – Sagarmatha Online News Portal
भाग्य चम्कदै छ, आज यी राशिवालाको : २०७६ चैत १५ गतेको राशिफल !
आज वि.सं. २०७६ चैत १५ गते शनिवार । तदनुसार इ.स. २०२० मार्च २८ तारिख । ने.सं. ११४० चौलाथ्व । चैत्र शुक्लपक्ष, चतुर्थी, २१ः३४ उप्रान्त पञ्चमी ।
शारीरिक र मानसिक रूपमा स्फूर्त भइनेछ । स्वादिष्ट भोजनको आनन्द मिल्नेछ । पारिवारिक आत्मीयता बढ्नेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन पनि कसिलो हुनेछ । शुभचिन्तकहरूको सहयोगले नाम र दाम प्राप्त हुनेछ । पहिलेको सफलताले उत्साह जगाउनेछ । इच्छाशक्ति बढ्नेछ भने रचनात्मक कार्य शुभारम्भ गर्न सकिनेछ । विगतको कर्मफलले मन प्रसन्न रहनेछ ।
आकस्मिक खर्चले अर्थ अभाव देखापर्न सक्छ । बेलैमा होस नपुग्नाले केही चुनौती झेल्नुपर्ला । समय दिन नसक्दा काम बिग्रन सक्छ । सरसापटमा नगद बाहिरिन सक्छ । खर्च गराउनेहरू सक्रिय हुनेछन्, भने सहयोग गर्नेहरू कमै भेटिनेछन् । शुभचिन्तकहरू समेत टाढा हुनेछन् । साँझदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ । रोकिएको काम बन्नेछ । पारिवारिक मिलन हुनेछ ।
आम्दानीले उत्साह जगाउनेछ । व्यापारमा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । आवश्यक भौतिक साधन जुट्नेछन् । सञ्चित धन उपयोग गर्दा फाइदा हुनेछ । श्रमको उचित मूल्यांकन भए पनि प्रतिफल हातलागी हुन समय लाग्नेछ । उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुनेछ । धेरै रकम जोहो गर्नुपर्ने हुँदा ऋणभार समेत बढ्न सक्छ । सरसापटमा पनि केही धन बाहिरिने देखिन्छ ।
मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ । प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन्, भने भविष्यका लागि दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ । कामको सन्दर्भमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसर जुट्नेछ । नोकरी तथा व्यवसायमा विशेष फाइदा होला । साँझतिर आयस्रोत सबल बन्नेछ र नगद पनि हातलागी हुनेछ ।
जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि फलप्राप्तिमा भने बाधा हुने देखिन्छ । आफ्नो वस्तुमा समेत अरूले दाबी गर्न सक्छन् । श्रम परे पनि लाभांश अरूको हातमा पर्न सक्छ । चिताएको काम रोकिनाले दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला । अध्यात्मभाव जागृत हुनुका साथै परोपकारी काम सम्पादन हुनेछ । समुदायको हितमा राम्रै काम गर्न सकिनेछ । परिश्रमले धेरैको मन जित्न सकिनेछ ।
परिबन्धले अप्ठ्यारो स्थिति निम्त्याउन सक्छ । सम्भावना देखिए पनि न्यून उपलब्धिमै चित्त बुझाउनुपर्ला । अरूका विषयमा चासो लिँदा व्यर्थैमा झमेला बेहोर्नुपर्ला । सामान्य कामका लागि पनि धेरै दौडधुप गर्नुपर्ला । तापनि समस्या दर्साउँदा सहयोगीहरूको साथ प्राप्त हुन सक्छ । काम पूर्ण नभए पनि प्रयत्न गर्दा आंशिक लाभ हुनेछ । साँझदेखि परिस्थिति अनुकूल बन्नेछ ।
घुमफिर र मनोरञ्जनको समय भए पनि परिस्थिति अनुकूल काम गर्नुहोला । प्रियजनसँगको सान्निध्यले दिन रमाइलो रहनेछ । भौतिक साधन जुट्नाले दैनिकी रमाइलो रहनेछ । आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ । अध्ययन र लेखनमा प्रगति हुनेछ । साँझदेखि स्वास्थ्य कमजोर हुनाले काम रोकिन सक्छ। खर्च पनि बढ्नेछ ।
द्वेष तथा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन् । चुनौती चिर्दै काम बनाउन सकिनेछ । स्वास्थ्य सबल रहनेछ भने पराक्रमद्वारा अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ । व्यापारलगायत आर्थिक लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । रोकिएका काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ । मिहिनेतले प्रतिस्पर्धाको दौडसमेत जिताउन सक्छ । केही लगानी गर्नुपरे पनि साँझदेखि दिगो काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ ।
अवसर आए पनि काम थाल्नुअघि विचार पुर्याउनुहोला। समयको गतिलाई पछ्याउन नसक्दा दुःख पाइनेछ । परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला । पेटको खराबीले स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ । पढाइलेखाइमा गुरुजनको सुझाव र काममा सन्तानको सहयोग लाभदायी बन्नेछ । अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ । मिहिनेत गर्दा पछिलाई फाइदा हुनेछ ।
हतारमा निर्णय लिने बानीले अप्ठ्यारो पार्ने हुँदा सजग रहनुहोला । तत्कालको फाइदा हेर्दा पछिलाई घाटा हुन सक्छ । बेसुरमा बोल्ने बानीले दुस्ख पाइनेछ । विशेष योजना सार्वजनिक नगर्नुहोला । काम बिग्रने डरले सताउनेछ । साझेदारीमा समस्या आउनाले सम्झौता भंग हुन सक्छ । साँझदेखि मिहिनेतको फल प्राप्त हुनेछ । रोकिएका काममा भने दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला ।
छोटो समयमा उपलब्धि हातलागी हुनेछ । स्रोत(साधन जुट्नाले कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । मिहिनेतले दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ । रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम गर्ने समय छ । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ । शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै हराउन सकिनेछ । मान्यजन तथा अग्रजहरूले साथ दिनेछन् । साँझतिर पारिवारिक असमझदारी बढ्न सक्छ ।
नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ । आर्थिक क्रियाकलापमा राम्रै फाइदा हुनेछ । बोलीको भरमा काम सम्पादन हुन सक्छ । विचारले धेरैलाई प्रभावित पार्न सकिनेछ । बौद्धिक क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ । मान-सम्मान पाइनेछ भने प्रशंसकहरू पनि बढ्नेछन् । गरेका कामबाट धेरैलाई फाइदा पुग्नेछ । सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन् । व्यावसायिक काममा मनग्गे लाभ हुनेछ ।
राशिफलले जे भने पनि तपाई कर्ममा विश्वास गर्नुस । निरन्तर कर्ममा लागिरहनुस एक दिन सफलताले अवश्य तपाईको पाउ चुम्नेछ ।
Published On: १४ चैत्र २०७६, शुक्रबार
आज तपाईको राशिफल : २०७७ जेठ २३ गते
आजको राशिफल : २०७७ जेठ २२ गते